Vola sandoka 1 060 000 Ariary no sarona
Nahomby ny fampitandremana nataon’ny mpitandro filaminana eto amin’ny firenena raha nampandre ny mponina fa misy vola sandoka miparitaka avy any andrenivohitra tao anatin’ny Distrikan’i Mahanoro.
Ny sabotsy 12 avrily 2014, no nahazo sy naharay fanampim-baovao ny Borigadin’ny Zandarimariam-pirenena ao Ambinanindrano, ao amin’ny distrikan’ny Mahanoro, fa misy olona mpanaparitaka vola sandoka ao Mandemoka, Kaominina ambanivohitra Befotaka, anatin’ny Distrikan’i Mahanoro ihany, ka avy hatrany dia naka ny fahazoan-dalana hanao fisav�na tamin’ny tonia mpampanao lalana avy ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohanay ao Vatomandry.
Ny ampitson’io ihany dia nidina teny an-toerana ny Zandary notarihin’ny Kaomandin’ny Borigadin’Ambinanindrano ka namantana avy hatrany tao amin’ny trano nipetrahan’ Atoa.Rakotonirina, antsoina hoe Tombolahy. Nahomby ny fisav�na natao ka tratra tamin’izany ny vola sandoka mitentina 1 060 000 Ariary. Voasambotra ihany koa Atoa Levalo izay fantatra fa niray tsikombakomba tamin’i Atoa Tombolahy sy ny vadiny, izay fantatra ihany koa moa fa vao tera-bao ho tapa-bolana lasa izay.
Ny lehilahy iray antsoina hoe Fianarana, voalaza ho vinanton’ Atoa.Levalo no tafaporitsaka nandositra ka mbola karohina hatramin’izao. Nambara ho ity Atoa. Fianarana ity no naka ireo vola ireo avy taty Toamasina.
(26) Erino RAZAFIMANANA : 24-04-2014 - 17:30